Iziganeko ezenza umfundi opheleleyo
Iziganeko zabaFundi abaPhambili
Abafundi abaphezulu bayakhuthazwa kwaye basebenza nzima
Ukufundisa ngumsebenzi onzima. Umvuzo ophezulu ukwazi ukuba unethuba lokuba nefuthe lobomi bomntu osemtsha. Nangona kunjalo, akuwona wonke umfundi owenziwe alinganayo. Uninzi ootitshala baya kukuxelela ukuba abanalo intandokazi, kodwa inyaniso kukuba kukho abafundi abaneziganeko ezithile ezenza abafundi bahle. Aba bafundi banomdla ngokuthandana nootitshala, kwaye kunzima ukuwamkela kuba benza lula umsebenzi wakho. Funda ukuze ufumane iimpawu ezili-10 bonke abafundi abanomdla.
Uninzi lwabafundisi bafuna abafundi ukuba babuze imibuzo xa bengayiqondi into efundiswayo. Yona ndlela kuphela yindlela utitshala eyazi ukuba uyayiqonda into ethile. Ukuba akukho mibuzo ibuzwa, ngoko utitshala kufuneka acinge ukuba uyayiqonda loo nto. Abafundi abalungileyo abayiki ukubuza imibuzo kuba bayazi ukuba xa bengenakufumana ingcamango ethile, kunokubakhathaza kamva xa lo buchule lwandiswa. Ukubuza imibuzo kudla ngokunceda kwiklasi ngokubanzi kuba amathuba ukuba unayo loo mbuzo, kukho abanye abafundi abanombuzo ofanayo.
I-Getty Izithombe / u-Erik Tham
Umfundi ogqibeleleyo akayena mfundi ohlakaniphileyo. Kukho abafundi abaninzi abasikelelwe ngobulumko bendalo kodwa bengenalo ukuzithiba ukuze bafumane ukuqonda. Ootitshala bathanda abafundi abakhetha ukusebenza kanzima kungakhathaliseki ukuba ubunjani bobunzima babo. Abafundi ababenzima kunabo bonke baya kuphumelela ebomini. Ukuba ngumsebenzi onzima esikolweni kuthetha ukugqiba izabelo ngexesha, ukubeka umzamo wakho omkhulu kwisabelo ngasinye, ucela uncedo olungakumbi xa ufuna, uchitha ixesha lokufunda iimvavanyo kunye nemibuzo, nokuqonda ubuthathaka nokukhangela iindlela zokuphucula.
Getty / Hero Umfanekiso
Ukubandakanyeka kwimisebenzi engaphezulu kwekharityhulam kunokuncedisa umfundi ukuba abe nokuzithemba , enokuphucula impumelelo yemfundo. Uninzi lwezikolo zinika i-plethora yemisebenzi yecandelo elithile apho abafundi bangathatha inxaxheba. Abaninzi abafundi abafanelekileyo bayazibandakanya kwinto ethile nokuba ngaba yizemidlalo, i-Future Farmers of America, okanye ibhunga labafundi . Le mi sebenzi inika amathuba amaninzi okufunda ukuba igumbi lokufundela ngokwemveli alinakukwazi. Le mi sebenzi iphinda inike amathuba okuthatha iimbopheleleko zobunkokeli kwaye bahlala befundisa abantu ukuba basebenzisane kunye njengeqela ukuze bafezekise injongo efanayo.
I-Getty Images / Zero Creatives
Ootitshala bathanda abafundi abalungileyo abayizinkokheli zendalo ngaphakathi kwigumbi lokufundela. Iiklasi ezipheleleyo zinobuqu babo obuzimeleyo kwaye ngokuqhelekileyo ezo nkalo ezineenkokheli ezilungileyo zizifundo ezilungileyo. Ngokufanayo, ezo nkalo ezingenabunkokheli beontanga zinokuba nzima kunzima ukuzenza. Izakhono zobunkokeli zihlala zingenangqondo. Kukho abo banayo kunye nabo abangenayo. Kwakhona nekhono eliqhubeka ixesha elide phakathi koontanga bakho. Ukunyaniseka yinto ebalulekileyo yokuba yinkokheli. Ukuba ngabafundi ofunda nabo bengathembeli kuwe, awuyi kuba yinkokheli. Ukuba ungumkhokeli phakathi koontanga bakho, unembopheleleko yokukhokela ngomzekelo kunye namandla angaphezulu okukhuthaza abanye ukuba baphumelele.
Isizathu sivela kwiindawo ezininzi. Abafundi bezona zifundo eziphambili ziyakhuthazwa ukuba baphumelele. Ngokufanayo, abafundi abangenayo intshukumiso ngabo bazinzima kakhulu ukufikelela, bahlala bexakekile, kwaye ekugqibeleni bayeke isikolo.
Abafundi abakhuthazwa ukuba bafunde kulula ukufundisa. Bafuna ukuba esikolweni, bafune ukufunda, kwaye bafuna ukuphumelela. Isizathu sithetha izinto ezahlukeneyo kubantu abahlukeneyo. Kukho abantu abambalwa kakhulu abangashukunyiswa nto. Ootitshala abalungileyo baya kufumana indlela yokukhuthaza abafundi abaninzi ngandlela-thile, kodwa abo bafundi abazikhuselayo banokulula ukufikelela kunezo ezingekho.
Ziyinkqubo yokuSombulula iiNgxaki
Akukho buchule ludlala ngaphezu kwelokuba unokuba ngumxhasi weengxaki. Ngamazinga aqhelekileyo aseburhulumenteni abanzi abafuna ukuba bakwazi ukuxazulula iingxaki, oku kubaluleke kakhulu ukuba izikolo zifanele zisebenze ngokubanzi ekuphuhliseni. Abafundi abanezobuchule bokusombulula iingxaki zimbalwa kwaye ziphakathi kakhulu kwesi sizukulwana ngokubanzi ngenxa yokufikeleleka kwabo bafumane ulwazi.
Abo bafundi bafumana ubuchule bokusombulula iingxaki zizinto ezinqabileyo ezifunyanwa ngabafundisi. Zingasetyenziselwa njengesixhobo sokunceda abanye abafundi ukuba babe yingxaki yokusombulula.
Imifanekiso ye-Getty Images / Johner
Elinye lamathuba amakhulu kunawo onke e-US kukuba ngamnye umntwana unemfundo yasesehla nasesidlangalaleni. Ngelishwa, akuwona wonke umntu osebenzisa ngokupheleleyo elo thuba. Kuyinyaniso ukuba wonke umfundi kufuneka ahambe esikolweni ixesha elithile, kodwa oko akuthethi ukuba wonke umfundi uthatha elo thuba kwaye akhulise amandla abo okufunda.
Ithuba lokufunda lingabalulekanga eUnited States. Abanye abazali ababoni ukubaluleka kwimfundo kwaye badluliselwa kubantwana babo. Kuyinto edabukisayo into edlalwa yinto yokunyuswa kwezikole . Abafundi abasemgangathweni bawasebenzisa amathuba anikwayo kwaye baxabisa imfundo abayifumanayo.
I-Getty Images / JGI / Jamie Grill
Ootitshala baya kukuxelela ukuba iiklasi ezipheleleyo zabafundi abalandela imigaqo kunye neenkqubo zinethuba elingcono ekukhuliseni amathuba abo okufunda. Abafundi abaziphatha ngokufanelekileyo banokufunda okungaphezu koobani babo ababa manani oqeqesho lwabafundi. Kukho abaninzi abafundi abahlakaniphile abaneengxaki zokuziphatha . Enyanisweni, abo bafundi bavame ukuba ngumthombo wokuxhalaba kootitshala kuba bengenakukwazi ukukhulisa ingqondo yabo ngaphandle kokuba bakhethe ukutshintsha indlela abaziphatha ngayo.
Abafundi abaziphatha kakuhle eklasini kulula ukuba ootitshala bajongane nazo, nangona bekulwela imfundo. Akukho mntu ufuna ukusebenzisana nomfundi ohlala ebangela iingxaki, kodwa ootitshala baya kuzama ukuhambisa iintaba kubafundi abahloniphekileyo, abahloniphekileyo, balandela imigaqo.
I-Getty Images / uPaul Bradbury
Ngelishwa, le mgangatho yinto yokuba abafundi ngabanye bahlala belawulwa kakhulu. Awukwazi ukulawula ukuba ngubani abazali bakho okanye abagcini bakho . Kwakhona kubalulekile ukuqaphela ukuba kukho abantu abaninzi abaphumeleleyo abangenayo inkqubo enenkxaso yokukhula. Yinto enokuyenzayisa, kodwa yenza kube lula xa unesistim sokuxhasa impilo.
Laba ngabantu abanomdla wakho engqondweni. Ziyakushukumisela ukuba uphumelele, unikele ngcebiso, kwaye ukhokele kwaye uqondise izigqibo zakho ebomini bakho. Esikolweni, bahamba kwiinkomfa zabazali / titshala, qinisekisa ukuba umsebenzi wakho wesikolo uyenziwe, ufuna ukuba ube namabakala amahle, kwaye ngokubanzi kukukhuthaza ukuba ubeke kwaye ufinyelele iinjongo zemfundo. Balapho kuwe ngexesha lobunzima kwaye bakuvuyisa ngamaxesha ophumelele. Ukuba nenkqubo enkulu yenkxaso ayenzi okanye ikuphule njengomfundi, kodwa ngokuqinisekileyo ikunika inzuzo.
Ba the mbekile
Ukunyaniseka ngumgangatho oza kuthanda wena kuphela ootitshala bakho kodwa nakwabantwana ofunda nabo. Akukho mntu ufuna ukuzungeza nabantu abaya kukwazi ukuzithemba. Ootitshala bathanda abafundi kunye neeklasi abazithembayo ngenxa yokuba banokubanika inkululeko edla ngokubonelela ngamathuba okufunda ayengayi kunikwa ngenye indlela.
Umzekelo, ukuba utitshala unethuba lokuthatha iqela labafundi ukuphulaphula intetho ngumongameli we-United States, utitshala angawucima ithuba xa iklasi lingathembeki. Xa utitshala enika ithuba, ubeka ukholo kuwe ukuba uthembeke ngokwaneleyo ukuphatha elo thuba. Abafundi abalungileyo baxabisa amathuba okubonisa ukuba bayathembeka.
Yintoni Eyenza Isintu
Indlela yokukhulisa i-Borax Crystal Snowflake
Ukuqonda i-Highway Hypnosis
I-Amazing Architecture ye-Alhambra eSpain
Ulungiso Lokuqala: Umbhalo, iMvelaphi, kunye Nentsingiselo
Ndixelel ngesiqu sakho
Ikhosi yoBugcisa yesiGaba seBakala lesi-12
Ikhosi yoBugcisa yesiGaba se-11
Yintoni iCarery-Over ebizwa ngeMathe?
I-Yurophu yeNyukelo Yonyaka YaseYurophu yeeNkokeli Zembeko
Indlela Yokukhangela Amalungelo Okungeniswa Kwemvume nge-Inventor
Ukubhiyozela u-Eva onguNyaka omtsha
Inkcazo kunye nemizekelo yoLwimi lwesiGrike
Ukudibana noGidonon: Ukungabaza Kuphakanyiswe nguThixo
I-Beaucoup des - I-Common French Mistake
Ziyintoni Iimfundiso Zokomoya?
Iimpawu Zengqondo Zisebenza Njani?
Iimvo zeGolda Meir
CSUEB GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Ukufakwa kweeMoto eziseKhaya
Yintoni Yenziwe Ngenyanga?
Yayiyini i-Qing Dynasty?
I-Wake Forest University i-GPA, i-SAT, kunye ne-ACT Data
Iingcebiso zokwakha umzimba zokukhupha ngaphandle kokufumana iiFat
Ukukhahlela iCocaine Facts
Khangela oku Kukhetho lweKomistry ngaphambi kokuba Ufumane IsiGanga
King Cobra Baffler Utility Metals
I-Mythology yamaGrike: Astyanax, uNyana kaHector
I-University of Rutgers i-Newark Admissions